किशोरले गर्भवती बनायो भन्न लाज लागेन ? मन मिले माया कुरानमिले पछी यस्तो बेइजत गर्ने ? खुल्यो सब रहस्य (भिडियो सहित) – Classic Khabar
April 16, 2021 318
उनले यस्तो आरोप लर्गापछि खण्डन गर्न उनी पनि मिडियामा सार्वजनिक भएका हुन् । गदालका अनुसार नयाँ बानेश्वरको एक जिम हलमा जाँदा खतिवडासँग उनको भेट भएको बताएकी छन् । खतिवडाले आफैं बोलाएको र मोबाइल नम्बर मागेपछि दिएको उनले बताइन् । त्यस पछि उनले विभिन्न बहानामा पैसा माग्न लागे । उनले देशको एउटा चिनिएको कलाकार देलान् नि त भनेर आफुले दिइरहेको बताइन् । यही बिषय लाई लिएर कलाकार सबिता भट्टराईले आफ्नो बिचार राखेकी छिन हेरौ भिडियो
Prevकाठमाडौमा पनि अब विद्यालय बन्द हुने, महानगरले थाल्यो यस्तो तयारी
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,बैशाख ४ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल